Christmas Markets site Train-enyere gị aka nweta n'ime Christmas spirit na a njem otu n'ime Europe ji mma obodo. Travel ụgbọ okporo ígwè na-eme ka gị na ahụmahụ ndị kasị kpokọtara mgbe! ọtụtụ ụgbọ na-emi odude ke esịt nke obodo center, na-eme na-ejegharị site na ụgbọ okporo ụzọ kacha mfe iru gị ebe. Ma ị na-aga na-ịzụ ahịa n'ihi na onyinye maka ezinụlọ, ịlele na mulled mmanya, ma ọ bụ nnọọ ụtọ Christmas ikuku na ndị ị hụrụ n'anya, ị na-n'aka nwere agaghị echefu ezumike. Anyị weere a ole na ole nke Europe ji mma Christmas ahịa ụgbọ okporo ígwè na ị ga-achọ uche.
Aga enchanted Christmas ahịa ụgbọ okporo ígwè!! Berlin bụ nnọọ mfe site na ụgbọ okporo ígwè na Europe nke na-eme ya na zuru okè ebe. Chọpụta German isi obodo ọgaranya na-adọrọ mmasị mere, nakwa dị ka ha iche iche Christmas ahịa, na nke kacha mma n'oge a kara aka shopping, ihe, na culinary ụtọ!
Gendarmenmarkt bụ ihe a ga-ahụ! Nke a na ntọlite ​​a ghọtara dị ka otu n'ime ndị kasị ọmarịcha nke Berlin si Christmas ahịa. Nụrụ ụtọ ụfọdụ obodo emeso ndị dị otú ahụ dị ka gingerbread, ṅara n'ọkụ chestnuts, mulled mmanya, na sausaji maka ihe kachasị German Christmas ahụmahụ.
Gbalịa mee ihe ndị na-atọ ụtọ ntụmadị na ọdịnala na ato uto dị ka ị na-anya si uloanumaanu na uloanumaanu maka onyinye na decorations, nakwa kwa mgbede ndụ opi egwu na-rụrụ si Rathaus mbara ihu, nke a bụ oké ụzọ agwụ a zuru okè ụbọchị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-by-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)